Mpamatsy vokatra & orinasa - Mpanamboatra vokatra any Shina
Fonenana sivana kitapo
Fonenana sivana kitapo fidirana ambony
Fonenana sivana kitapo fidirana eo anilany
Fonenana sivana kitapo ekonomika
Fonenana sivana PP Bag
V-clamp Fonenana sivana malalaka misokatra maromaro
Toeram-panivanana sivanan-kitapo Davit Arm
Ny lohataona manampy trano fonenana sivana marobe
Kitapo sivana PO
Kitapo sivana PE
Kitapo sivana PEXL
Kitapo sivana monofilament nylon
Kitapo sivana NOMEX
Kitapo sivana PTFE
Kitapo sivana tanteraka
Kitapo Adsorption solika
Kitapo sivana mahomby
Kitapo sivana LCR-100 Series
Kitapo sivana LCR-500 Series
Kitapo sivana AGF Series
Kitapo sivana PGF Series
Kitapo sivana MAXPONG
Cartes Filer Vessel
Fantsom-bokatra miendrika adidy maivana
Taratasy fanamoriana marobe-cartridge mavesatra
Famolavolana famehezana tsara indrindra fangatahana filtration kritika tena ilaina.
Ny lohan'ny fametahana presce dia hampihenana ny fahaverezan'ny tsindry.
Volavola fidirana amin'ny lafiny
Efatra fonenana efatra 01 #, 02 #, 03 #, 04 #
Sambo mahomby indrindra amin'ny tsena
V-clamp Voninkazo sivana malalaka misokatra haingana dia natao tao amin'ny ASME VIII jereo ny fenitra VIII DIV I. Mba hahomby sy azo antoka ary mateza, tsy mitovy amin'ny sivana kitapo nentim-paharazana. Azonao atao ny manokatra sy manidy ny fonony tsy misy fitaovana. Tsy mila esorina na hamafisina am-polony na amam-polony am-polony avy eo, mba hahatsapa fomba mety sy haingana hanokafana sy hanidiana, hanolo haingana ny kitapo sivana ary hampihena ny hamafin'ny asa ataon'ny mpandraharaha.
Mora tokoa izao ny manokatra sy manidy ny sambonao hiova kitapo sivana ao anatin'ny 2 minitra fotsiny!
Ny mpampiasa dia mamorona sivana davit arm multi filter sivana kitapo miaraka amina fanamboarana kitapo 2 ka hatramin'ny 24 kitapo hihaonana amin'ny tahan'ny taha mikoriana bebe kokoa hatramin'ny 1.000 m3 / ora.
Ny lohataona anay dia manampy amin'ny sambo marobe miaraka amin'ny fanamboarana manomboka amin'ny kitapo 2 ka hatramin'ny kitapo 24 miaraka amina famaranana fanakatonana rakotra lohataona tsy manam-paharoa hihaona amin'ny tahan'ny taha mikoriana bebe kokoa hatramin'ny 1.000 m3 / ora, ny famolavolana sivana kitapo rehetra ao amin'ny ASME VIII dia mahita ny fenitra VIII DIV I.
Precision Filtration dia manamboatra tsipika feno kitapo sivana avo lenta. Ireo kitapo sivana ireo dia mandaitra amin'ny fampiharana izay ilana fahombiazan'ny filtrasiôna avo kokoa. Ny kitapo sivana mahomby rehetra dia misy amin'ny habe maro isan-karazany mifanaraka amin'ny trano fonenana sivana indostrialy mahazatra. Ny kitapom-bolan'ny sivana avo lenta dia azo amboarina.
Kitapo sivana AGF
Kitapo sivana LCR-100
Precision Filtration dia manamboatra andalana feno kitapo sivana Adsorption solika mba hialana amin'ny fahalotoan'ny solika amin'ny rano mikoriana. Ny kitapo dia mandaitra amin'ny rano, ranomainty, loko (anisan'izany ny rafitra E-Coat), ary ny tsiranoka hafa. Ny kitapo sivana adsorption menaka rehetra dia misy amin'ny habe maro isan-karazany mifanaraka amin'ny trano fonenana sivana indostrialy mahazatra. Ny kitapo sivana menaka Adsorption habe dia azo amboarina.
Kitapo sivana LCR-500
85, Làlana Kanggong, Distrikan'i Qingpu, Shanghai 201714, PRChina